Meriipol Keessaa Namoota Baasuun Itti Fufee Jira: Antoniyoo Gutarrees
Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Gutarrees (Suuraa faayilii)
Magaala Yukreen gama kibbaa kan taatee Maripool keessaa fi warshaa sibilaa Azovstal kan magaalatti keessaa siviiloota jiran baasuu kan marsaa sadaffaa gaggeeffamaa kan jiru ta’u, barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Gutarrees kamiisa kaleessaa gola naga eegumsaaf ibsanii jiru.
Torban kana siviloonnii 101 Azovstal irraa kanneen biroon 400 ta’an naannoo cina jiran irraa tokkummaa mootummootaa fi garee fannoo dimaa kan addunyaatii baafamanii jiru.
Waan dandeenya mara gochuun namoota iddoo iddoo ijaan arguuf namatti hin tollee Sanaa baasuu qabna jedhan Gutarrees,Ebla 26 Moskootti imaluun prezidaant Putiin waliin eega dubbatanii booda, Ebala 28 gara Kiyeevti imaluun prezidaantii biyyatti Volodmiin zeleenskii waliin wal argan.
Yeroon prezidaant putiin waliin wal arge, gargaarsii dhala namaa seenuun akkasumas naannoo waraanan marsaman mara keeessumaa Meeripool keessaa namoota baasuun barbaachisaa ta’uun cimsee dubbadhe.
Siviloota warshaa Azovstal keessa jiraniif karaan nagaan isaa amansisaa ta’e akka banamee lafa nagaatti akka ba’an jabeesseen gaafadhe.kun akka ta’u mirkanii argadheen jira.
Raashaan Yukreen weeraruun abbaa biyyummaa ofii fi chaartara Tokkummaa Mootummootaa cabsuu akka ta’e kan dubbatan Gutarrees uummata Yukree Raashaa fi addunyaa guutuuf jecha lollii kun xumuura argachuu qaba jedhan.